जुलियन ट्रेजर: राम्रो सुन्ने ५ तरिकाहरु - English-Video.net
हामी सुन्ने क्षमता गुमाउदैँ छौँ।
हामी अन्दाजी ६० प्रतिशत समय सुनेर गर्ने सन्चारमा खर्च गर्छौँ।
तर हामी यसमा त्यति पोख्त चाँहि छैनौँ।
हामीले सुनेको २५ प्रतिशत मात्र लिन्छौँ।
अहिले तपाईँहरु, यो प्रवचनलाई भनेको होइन है,
तर साधारणतया यस्तै हुन्छ।
ल हामी सुनाईलाई परिभाषित गरौँ
ध्वनिको अर्थ बुझ्ने कामको रुपमा।
यो एउटा दिमागी प्रक्रिया हो,
र यो एउटा निचोडात्मक प्रक्रिया हो।
यसको लागि हामीले केही चाखलाग्दा तरिकाहरु प्रयोग गर्छौँ।
यी मध्ये एउटा ढाँचा पहिचान हो,
(भीडको हल्ला) यस्तो ककटेल पार्टीमा,
यदि मैले, "डेभिड, सारा, यता सुन त,"
भन्दा केहि चुपचाप बस्नुहुन्छ।
हामीले ढाँचालाई चिनेर
हल्लाबाट चाहिएको सङ्केतलाई छुट्टयाउँछौँ,
विशेषगरि आफ्नो नाम।
फरक छुट्टयाउने अर्को तरिका हो।
मैले यो ध्वनि केही मिनेटसम्म बजाइरहे भनेँ,
तपाईँहरुले सुन्ने चेष्टा गर्नुहुन्न।
हामी फरकलाई सुन्छौँ,
अनि नफेरिने ध्वनिलाई छोड्दिन्छौँ।
अनि धेरै प्रकारका फिल्टरहरु अाउँछन।
यस्ता फिल्टरहरुले हामीलाई ठ्याक्कै
त्यहाँ पुर्याउछन जुन कुरा हामी सुन्न खोजिरहेका हुन्छौँ।
धेरै जनालाई यस्ता फिल्टरबारे
थाहा नै हुदैँन।
तर खासमा तिनीहरुले नै वास्तविकता देखाउँछन,
किनभने यस्ता फिल्टरहरुले नै हामी कुन कुरामा ध्यान दिदैँ छौँ भन्ने बताउँछन्।
म एउटा उदाहरण दिन्छु:
सुन्नको लागि नियत पनि महत्वपुर्ण कुरा हो।
जब मैले बिहे गरेँ,
मैले वाचा गरेको थिएँ उनका कुरा सधैँ सुन्नेछु
जिन्दगीमा पहिलो पटक।
र अहिले म सधैँ यो कुरा पुरा गर्न सकेको छैन।
तर यस्तो अभिप्राय राख्नु सम्बन्धमा राम्रो हुन्छ।
तर यो पनि सबै होइन।
ध्वनिले नै हामीलाई स्पेस(स्थान) र समयमा स्थापित गराउँछ।
यदि तपाईले अहिले यो कोठामा आँखा बन्द गर्नुभयो भने पनि
तपाईँले यो कोठाको साइज अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ
र भित्ताहरुबाट फर्केको आवाज सुनेर।
र यहाँ कति मान्छे छन भन्ने पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ
किनभन्दा सानासाना आवाजहरु तपाईँहरु सुनिरहनुभएको छ।
अनि ध्वनिले हामीलाई समयमा राख्छ,
किनभन्दा ध्वनिमा सधैँ
समय पनि समाहित हुन्छ।
खासमा, म के भन्न रुचाउँछु भने सुनाई नै प्रमुख कुरा हो
जसबाट हामी समयलाई अनुभव गर्छौँ
त्यसैले "ध्वन्यात्मकता नै समय र अर्थ हो(Sonority is time and meaningJean-Luc Nancy)" -- एउटा राम्रो उद्गार।
मैले सुरुमा नै भनेको थिएँ, हामीहरु सुन्ने क्षमता गुमाउँदै छौँ।
मैले किन त्यस्तो भनेँ त?
त्यसको पछाडि धेरै कारणहरु छन्।
पहिलो, हामीले रेकर्डिङ प्रविधि पत्ता लगायौँ--
पहिले लेखाई, त्यसपछि ध्वनि रेकर्डिङ
अनि अहिले भिडियो रेकर्डिङ।
जुन ध्यान र शुध्द सुन्ने प्रयास गरिन्थ्यो
त्यो सजिलो हराएर गयो।
दोस्रो, संसार धेरै कोलाहलमय छ,
(हल्ला) यस्ता कर्कश हल्लाहरु भइरहेछन,
श्रव्य र दृश्य दुवैमा,
अनि सुन्न गार्हो हुदै छ,
अनि सुन्दैमा थाकिने भइसक्यो।
धेरै मानिसहरुले हेडफोन प्रयोग गर्छन,
तर त्यसले पनि ठुला, सार्वजनिक स्थल,
जस्तै यहाँ, यी साझा ध्वनिहरु,
लाखौँ, साना, मसिना व्यक्तिगत ध्वनिवृत्तमा परिवर्तन हुन्छन्।
यस्तो परिदृश्यमा, कसैले कसैलाई सुनेको हुदैँन।
हामीहरु अधैर्य बन्दै छौँ।
हामीलाई वक्तृत्व मन पर्दैन,
चाखलाग्दो बयान मन पर्छ।
साथै कुराकानीको कला
प्रतिस्थापित हुदैँ छ-- खतरनाक रुपमा, मेरो विचारमा--
म भन्न सक्दिन यो प्रवचनमा कतिको सुनिएको छ,
दुखद कुरा यो सर्वत्र छ,
खासगरि संयुक्त अधिराज्यमा।
हामीहरु कम संवेदनशील हुदैँ छौँ।
हाम्रा मिडियाहरु कराउनै पर्छ हेडलाइनहरु तिर
हाम्रो ध्यान तान्न।
र यसले के बताउँछ भने हाम्रो ध्यान पुग्दैन
अनि कम चर्चा गरिएकामा।
यो गम्भिर समस्या हो कि हामी सुन्ने क्षमता गुमाउदैँ ‍छौँ।
यो साधारण हुदैँ होइन।
किनभने सुनाई हाम्रो बुझाईको ढोका हो।
सचेत सुनाईले सधैँ बुझाईलाई सघाउँछ।
र सचेत सुनाई बिना
यस्ता कुरा हुन सक्छन--
एउटा यस्तो संसार जहाँ एउटाले अर्कोलाई सुन्दैन,
पक्कै पनि डरलाग्दो ठाउँ हुनेछ।
त्यसैले म के कुरा बाँड्न चाहन्छु भने
पाँच साधारण अभ्यासहरु, साधनहरु जुन तपाईँ सगैँ लिएर जहाँ पनि पुग्न सक्नुहुन्छ,
आफ्नो सचेत सुनाईलाई सुधार्न।
के तपाईँहरु यो चाहनुहुन्छ?
(श्रोताहरु : हजुर) राम्रो।
पहिलो हो शान्ति।
दिनमा तीन मिनेट (शान्तिमा)मौन बस्नु
एउटा राम्रो अभ्यास हो
जसले तपाईँका कानलाई जाँचेर पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउँछ
अनि तपाईँले पहिले जस्तै सुन्न सक्नुहुन्छ।
यदि पुर्ण शान्ति मिल्दैन भने
चुपचाप भए पनि हुन्छ।
दोस्रो, म यसलाई मिक्सर भन्छु।
(हल्ला) यदि यस्तो कोलाहलमय वातावरणमा तपाईँ पर्नुभयो भने--
र हामी सबैजसोले धेरैजसो समय यस्तै हल्लामा बस्छौँ --
कफि बार सुनौँ
कति च्यानलहरु मैले सुन्न सक्छु त?
ती मध्ये कति च्यानललाई मैले खासमा सुनिरहेको हुन्छु?
तपाईँले यो सुन्दर ठाउँमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै तालको छेउछाउमा।
कति चराको आवाज म सुन्न सक्छु?
तिनीहरु कहाँ छन? अनि त्यो छाल नि?
यो एउटा राम्रो अभ्यास हो
सुन्ने क्षमताको गुणस्तर बढाउनको लागि।
तेस्रो, यो अभ्यासलाई म रमाउनु भन्छु,
र यो एउटा सुन्दर अभ्यास हो।
यो साधारण आवाजहरुमा नै रमाउनुसित सम्बन्धित छ।
ल, उदाहरणको लागि, मेरो सुकाउने मेसिनलाई लिउँ।
(ड्रायरको आवाज) यो वाल्ट्ज सङ्गीत हो।
एक, दुइ, तीन।एक, दुइ, तीन।एक, दुइ, तीन।
अथवा यो पो विचार गर्ने कि?
(कफि पिस्ने )
यस्ता साधारण ध्वनिहरु पनि रोचक हुन्छन ध्यान दिने हो भने।
म यसलाई अदृश्य वाद्य भन्छु।
यस्ता ध्वनि सधैँ हाम्रो वरिपरि भेटिन्छन।
जुन सबैभन्दा महत्वपुर्ण हुन पनि सक्छ,
जब तपाईँले एउटा कुरा छोड्नुहुन्छ।
त्यो सुन्ने अवस्था वा आसन हो --
मुल कुरा के भने तपाईँले आफ्नो सुन्ने आसन वा अवस्था परिवर्तन गर्ने
जबसम्म उचित सुन्ने अवस्थामा पुगिदैँन।
यो पनि ती फिल्टरहरुसँग नै खेल्ने हो।
तपाईँलाई याद छ नि, मैले सुरुमा तपाईहरुलाई फिल्टर दिएको थिएँ।
अब यसको खेल सुरु भयो तिनिहरुलाई लिभर जस्तो गरेर
तिनीहरुबारे सचेत हुने र फरकफरक ठाउँमा सारेर हेर्ने।
यी केही सुन्ने अवस्था वा आसनहरु हुन,
जुन तपाईँहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यस्ता धेरै छन।
यसमा रमाउनुस। यो रोचक पनि छ।
अनि अन्तिममा एउटा संक्षेप है।
तपाईँले यसलाई सुनाईमा वा सन्चारमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईँ यस्तो रोलमा हुनुहुन्छ भने --
र मलाई लाग्छ सबैजसो जो यो प्रवचन सुन्दै हुनहुन्छ --
यो संक्षेप हो 'रस'।(RASA)
जुन एउटा संस्कृत शब्द हो
रस वा सारको लागि।
अब 'रस' को पुरा रुप हुन्छ पाउनु (Receive)
अर्थात स्रोत तिर ध्यान दिएर केहि पाउनु,
सराहना गर्नु (Appreciate), सानो आवाज निकाल्नु
जस्तै अँ, ओहो, ठिक छ,
सारांश निकाल्नु (Summarize), "त्यसैले" भन्ने शब्द सन्चारमा धेरै महत्वपुर्ण छ,
अनि सोध्नु(Ask), पछि प्रश्न सोध्ने।
अहिले आवाज नै मेरो लागि उत्साह हो, यो नै मेरो जिवन हो।
मैले यसकै बारेमा किताब लेखिसकेँ। त्यसैले म सुन्नकै लागि बाँच्छु।
यो अति नै धेरै हुन सक्छ कति मानिसहरुको लागि।
तर म के मा विश्वास गर्छु भने मान्छेले
सचेत भएर सुन्नुपर्छ
पुरा जिवन जिउनलाई‍--
स्थान (space) र समयमा जोडिन
हाम्रो वरपरको भौतिक संसारसँग,
एक अर्काको बुझाइलाई जोड्न,
आध्यात्मिक संयोजनको कुरै नगरौँ,
किनकि मैले थाहा पाएको आध्यात्मिक मार्गमा
सुनाइ र यसको मनन
नै केन्द्रमा रहेको छ।
हाम्रा स्कुलहरुमा सुन्न सिकाइनु पर्छ
एउटा सीपको रुपमा।
यो किन गरिदैनँ? अनौठो छ।
यदि हामीले सुनाइलाई स्कुलमा सिकाइयो भने,
हाम्रो सुनाइलाई भिरालो धरापबाट
खतरनाक संसारमा ल्याउन सक्छौँ जसको बारेमा मैले कुरा गरेँ
र त्यहाँ लैजान सक्छौँ जहाँ सबै सचेत भएर सुनिरहेका हुनेछन --
अथवा कम्तिमा यसको लागि तयार हुनेछन।
अहिले त्यो कसरी होला भन्न सकिदैँन,
तर यो TED हो,
र मलाई लाग्छ TED समुदाय जे गर्न पनि सक्षम छ।
त्यसैले म तपाईँलाई मसँग सम्पर्क गर्न निम्त्याउँछु, र सबैसँग सम्पर्कमा रहनको लागि,
यो कार्यलाई सबैतिर पुर्याउनुहोस अनि स्कुलमा पनि सुनाइ सिकाइयोस,
जसले संसारलाई यस्तो पुस्तामा रुपान्तरण गरोस जुन सचेत सुनाइ सहितको हुनेछ --
संचार सम्पर्कको संसार,
बुझाइको अनि शान्तिको संसार।
मलाई आज सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद।
जुलियन ट्रेजर: राम्रो सुन्ने ५ तरिकाहरु | TED Talk | TED.com